Samsung dia mandefa hafatra amin'ireo tompon'ny Galaxy S7 hilaza aminy fa azo antoka | Vaovao momba ny gadget
Samsung dia mandefa hafatra amin'ireo tompon'ny Galaxy S7 hilaza aminy fa azo antoka izany
Tsy misy isalasalana fa tsy fotoana mety ho an'ny Samsung ireo taorian'ny fanapahan-kevitra hanongotra ny Galaxy Note 7 eny an-tsena mandrakizay noho ny olan'ny bateria nahatonga azy hipoaka. Izany koa dia nahatonga ireo mpampiasa finday avo lenta an'ny orinasa Koreana Tatsimo nanomboka natahotra, talohan'ny nipoahan'ilay fitaovana ary naratra izy ireo.
Manome toky ny rehetra Samsung dia mandefa hafatra fanosehana ho an'ny tompona Galaxy S7, amin'ny iray amin'ireo kinova roa misy, izay anomezany tokana tsara fa fitaovana azo antoka ity ary tsy tokony haverina izy ireo.
Mpampiasa maro no misafotofoto ny Galaxy Note 7 amin'ny Galaxy S7, ary izany dia nanjary nanandrana nanadio ny zava-misy i Samsung, mba hialana amin'ny olana lehibe kokoa. Ho fanampin'izay, manantena izy fa hijanona ireo antso sy hafatra voarain'ny serivisy ho an'ny mpanjifa mangataka ny hamerenana sy hamerenana ny vola amin'ny terminal izay tsy mifanaraka.
Raha manana Galaxy S7 ianao dia afaka miaina mora foana satria finday avo lenta azo antoka ity ary raha manana Galaxy Note 7 ianao omaly dia hanazava amin'ity lahatsoratra ity izay tokony hataonao amin'ity terminal ity.
Nahazo ny hafatra nalefan'i Samsung ve ianao ary ampitandreman'ny orinasa Koreana Tatsimo ny amin'ny fiarovana ny Galaxy S7?.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Samsung dia mandefa hafatra amin'ireo tompon'ny Galaxy S7 hilaza aminy fa azo antoka izany
OnePlus dia manamafy fa tsy hijanona amin'ny famokarana ny OnePlus 3
ASUS Transform Mini dia azo alefa mialoha